Nzira itsva yekushungurudzwa - The Zimbabwean
Nzira itsva yekushungurudzwa
Kurwisana pamusoro pezvematongerwo enyika kwamuka kuEpworth, paine fungidziro yekuti vatsigiri vechidiki veZanu (PF) neveChipangano vari kubinha vatsigiri veMDC.
Chipangano inonzi yakatara dzimwe nzvimbo muEpworth kuti dzisatsikwe nevatsigiri vebato reMDC uye vanonzi vagadzira nzvimbo dzekushungurudza vanhu- chiitiko chinofananidzwa nezvakaitika musarudzo dzakaitwa muna2008. Vakuru vakuru mubato reZanu (PF) vane taririso yekukwikwidza musarudzo dzinotevera munzvimbo iyi vanonzi ndivo vari kukonzera kushungurudzwa kwemhomho uku.
Bepanhau reZimbabwean rakataura neavo vakabatwa, ndokurohwa nekushungurudzwa muna Nyamavhuvhu vachipomherwa mhosva yekukwikwidza uye kusatsigira vaRobert Mugabe.
Vakatsanangura nhoroondo yezvakaitika mumaoko eChipangano vakati vave kurarama vachityira hupenyu hwavo sezvo vechidiki vebato reZanu (PF) ava vakatsidza kuvaponda.
Vaviri vakarohwa vanoti Bolden Nhika, webato reMDC- T ari munyori webazi revechidiki muWard 2 naPetros Makaza vakati William Makurumidze, anoshanda semubatsiri wevanofamba vakachengetedza mutungamiriri wenyika, ndiye mumwe wevane chekuita nekurohwa kwavo.
Vanoti Makurumidze akavavinga panzvimbo yekutandarira pazvitoro zveMunyuki ndokuvaudza kuti vabvise nhumbi dzinoratidza kuti vatsigiri veMDC- T apo vainwa zvinwiwa zvavo.
“Waive musi wa10 Nyamavhuvhu apo taitandara panzvimbo yekutandarira husiku paFarai. Makurumidze akauya ndokutiudza kuti tibvise nhumbi dzeMDC dzataive takapfeka. Akatora doro redu achiti tairipa mhosva yekutsigira vaMorgan Tsvangirai.
“Takaramba zvaaitaura izvi akatiudza kuti achatiranga. Mangwanani akatevera, akauya kumba kwedu nemupurisa aive akapfeka nhumbi dzebasa.
Vaive vachiperekedzwa nevatsigiri vebato vanomwe vaive vakapfeka nhumbi dzavo. Asi paive nevamwe vaive vakapfeka shangu dzechisoja,”
Vaviri ava vakasungwa vasina kuudzwa mhosva yavaive vapara uye mupurisa akavasunga akaramba kuburitsa chitupa chake chebasa.
“Vakatiisa mumotokari chena yerudzi rweMazda B1600 vakatiudza kuti vari kutiendesa kuChipangano. Makurumidze akatsidza kuti taive tonourayiwa kuMbare ndokudada nehutsinye uye humhondi hwevechidiki ava. KuMbare, takaendeswa kumahofisi eZanu (PF) kunonzi kuMbare 3 kwatakawana veChipangano vakatimirira. Mupurisa akasiya njema dzaaive ashandisa paakatisunga,” akadaro Nhika.
Nhika naMakaza vakati vakabatwa semhuka vari mumaoko eChipangano avo vaiparadzira moto pamiviri yavo panguva imwechete nekuvarova nesimbi, zvibhakera neshangu.
Vaviri ava vakapedza zuva nehusiku vari mumaoko eZanu (PF) kuMbare mushure ndokuendeswa kumapurisa kwavakanenerwa mhosva naMakurumidze yekumubira.
“Vaiimba kuti Nyama yekugocha apo vaitirova vachipana mukana wekutirova kumahofisi avo kuMbare,” akadaro Makaza, achiwedzera nekuti musoja akanyepera mapurisa kuti taive tarohwa nemhomho yevanhu.
“Takarara kukamba yemapurisa kuMbare ndokuzoendeswa kumapurisa ekuEpworth, uko mumwe mukuru mukuru wemapurisa akaramba kuti tiwane rubatsiro rwekuchipatara achiti aizotiendesa panguva yake.”
Makurumidze anova mumhan’ari wenyaya iyi haana kutevera nyaya yake kumapurisa, zvakaita kuti vaviri ava varambe vari mumaoko emapurisa.
Akazouya mushure mekudaidzwa nemapurisa, nyaya iyi ndokuendeswa kumatare musi wa15 Nyamavhuvhu uko vakapihwa mutongo wemuripo wemadhora makumi matatu.
Vaviri ava vanoti vakaenderera mberi nekutyisidzirwa mushure mekusunungurwa. Mumwe mutsigiri weMDC, Samson Muripo akataura zvekare nezvekushungurudzwa kwaakaitwa panzvimbo yevatsigiri veZanu (PF) kuWard 2 Epworth mushure mekutapwa achityaira motokari yake munzvimbo iyi.
Akatapwa munguva yekupemberera magamba ndokuendeswa kunzvimbo yavo kwaakarohwa nekushungurudzwa achirohwa nesimbi nematanda.
“Vakandiudza kuti handifaniri kufamba panzvimbo iyi sezvo yakachengeterwa vatsigiri veZanu (PF) chete. Izvozvi, ndine dambudziko pakufamba sezvo ndakarohwa zvikuru pagumbo nesimbi. Kubvira ipapo, ndakatyisidzirwa kasingaperi pamusoro peupenyu hwangu nevatsigiri veZanu (PF)” akadaro Muripo. Gumbo rake rekurudyi rave nenhuta uye anotyira kuti ringangodamburwe.